Qalalaase ka dhashay gacan ka hadal dhexmary Hay'adda NISA iyo tan Jinsiyadaha / Socdaalka - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Qalalaase ka dhashay gacan ka hadal dhexmary Hay’adda NISA iyo tan...
Qalalaase ka dhashay gacan ka hadal dhexmary Hay’adda NISA iyo tan Jinsiyadaha / Socdaalka
Waxa ka socda gudaha Garoonka Aadan Cadde gaar ahan qaybta Safarka Caalamiga ah qalalaase keenay buuq xoogan. Waxaana halka aka dhacay gacan ka hadal xoogan oo dhaxeeya ciidamada NISA iyo Howlwadeenada Hay’adda Socdaalka ee Immigrationka.
Waxaa dadka jooga ay sheegayaan in ay ka jirto xaalad adag oo khatar.
Labada ciidan ayaa isku qabtay qoryo iyaga oo laga baqay in uu halkaas ka dhaco dagaal uu dhiig ku daato. Taliyaha hay’adda socdaalka iyo injisiyadaha Gaashaanle Maxamed Aadan Koofi ayaa hadala la sheegyaa in uu gaaray garoonka si uu u kala dhaxgalo labada dhinac ee gacan ka hadalka uu dhaxmaray.
Dhanka kale Waxa gabi ahaan la joojiyay isku socodka dadka waxaana hadda arinta gacanta ku haya taliska ciidanka Booliiska.